कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ २ गते) – इन्सेक
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ २ गते)
काठमाडौँ ०७७ जेठ २ गते
नेपालमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या २ सय ६७ पुगेको छ । जेठ २ गते राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा गरिएको परीक्षणमा थप नौ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या २ सय ६७ पुगेको हो । अभिलेखित तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश १ मा ३६, प्रदेश २ मा १ सय ३, बागमती प्रदेशमा १५, गण्डकी प्रदेशमा तीन, प्रदेश ५ मा १ सय ५ र सुदूरपश्चिममा पाँच जना सङ्क्रमित छन् । हालसम्म पर्सामा ८९, कपिलवस्तुमा ३९, बाँकेमा ३३, उदयपुरमा ३३, रुपन्देहीमा २८ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ । त्यसैगरी काठमाडौँमा नौ, कैलालीमा चार, बारा, धनुषा, रौतहट र दाङमा तीन/तीन जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । बागलुङ, भक्तपुर, चितवन, झापा, महोत्तरी र सर्लाहीमा दुई/दुई जनामा तथा बर्दिया, भोजपुर, कञ्चनपुर, नवलपरासी पश्चिम, सप्तरी, मकवानपुर, धादिङ र नवलपरासी पूर्वमा एक/एक जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।
प्रदेश १ मा पीसीआर र आरडीटी विधिबाट १२ हजार ८५ जनाको परीक्षण गरिएको छ । जेठ २ गतेसम्म पीसीआर परीक्षणका लागि कोरोना भाइरसका शङ्कास्पद २ हजार ९ सय ७४ जनाको नमुना सङ्कलन गरिएको छ । ८ सय ७७ जना महिला र २ हजार ९७ जना पुरुषको नमुना सङ्कलन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशमा जेठ २ गते ५५ जनाको नमुना सङ्कलन गरिएको छ । प्रदेशमा जेठ २ गतेसम्म ५ हजार ८ सय १६ बेडको क्वारेण्टाइन निर्माण गरिएको छ । जेठ २ गते ३१ वेड थप गरिएको छ । क्वारेन्टाइनमा १ सय ७३ जना महिला र ५ सय १४ जना पुरुष गरी ६ सय ८७ जना रहेका छन् । होमक्वारेन्टाइनमा बस्नेको सङ्ख्या ८ हजार २ सय ५५ जना छ । होमक्वारेन्टाइनमा १ हजार ६ सय २४ जना महिला र ६ हजार ६ सय ३१ जना पुरुष रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश २ मा जेठ २ गते चार जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । जसअनुरुप पर्साको बीरगञ्ज महानगरपालिका ९ र १० वर्षीय बालक तथा २३ र ४७ वर्षीया महिलामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । प्रदेश २ मा जेठ २ गतेसम्म कोरोना भाइरसका शङ्कास्पद ४ हजार ९ सय ८० जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ । जसमा ३ हजार ८ सय १७ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने १ सय ३ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले बताउनु भयो । अन्यको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ । त्यसैगरी, जेठ २ गतेसम्म आरडीटी किटबाट परीक्षण ५ हजार ५ सय १७ जनाको गरिएकोमा ५ हजार ५ सय ७ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने १० जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । प्रदेशमा विभिन्न जिल्लामा निर्माण गरिएको ४ हजार २ सय ६७ बेड क्षमताको १ सय ८१ ओटा क्वारेन्टाइनमा १ हजार ९ सय १५ जना व्यक्तिलाई राखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार प्रदेश भरिमा हालसम्म ४ हजार ६ सय ८८ जना व्यक्तिहरू होमक्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने ३ सय ९८ बेड क्षमताको आइसोलेशनमा १ सय ८ जना उपचाररत छन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को उच्च जोखिममा रहेको बारा जिल्लामा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने मानव अधिकारकर्मी सहित ४२ जना सञ्चारकर्मी, दुई जना राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका कर्मचारी र कलैया अस्पतालका ५८ जना स्वास्थ्यकर्मी सहित १ सय २ जनाको कलैया अस्पतालमा जेठ २ गते स्वाब सङ्कलन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी ओम खड्काले बताउनु भयो ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा जेठ २ गते फोहोरमैला सङ्कलन कार्यमा संलग्नहरूको कोरोना संक्रमण परीक्षण गरिएको छ । टेकुमा उनीहरूको आरडीटी परीक्षण र पीसीआरका लागि स्वाब सङकलन गरिएको हो ।
ललितपुरको पाटन अस्पतालमा जेठ २ गते ११ जनालाई भर्ना गरी आइसोलेशन वार्डमा उपचार गरिरहेको अस्पतालले जनाएको छ । कोभिड–१९को पुष्टि भएका तीन जनालाई समेत भर्ना गरी आइसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको पाटन अस्पतालका निर्देशक डा. विष्णु शर्माले जानकारी दिनु भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा जेठ २ गतेसम्म ७ सय ८८ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ भने ७ सय ६४ जनाको परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । २२ जनाको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ । प्रदेशमा जेठ २ गतेसम्म कुल ६ हजार ९ सय ३२ जनाको ¥यापीड डाइगनोष्टिक टेष्ट किटबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म बागलुङमा दुई जना र नवलपरासी पूर्वमा एक जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा अब पीसीआर विधिबाट मात्रै कोरोना सङ्क्रमणको परीक्षण गरिने भएको छ ।
नेपालमै सबैभन्दा बढी प्रदेश ५ मा १ सय ५ जना कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि भएका छन् । कपिलवस्तुमा ३९, बाँकेमा ३३, रुपन्देहीमा २८, दाङमा तीन, बर्दिया र नवलपरासी पश्चिममा एक÷एक जना सङ्क्रमित पुष्टि भएका हुन् ।
नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट उद्दार गरी बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाको क्वारेण्टाइनमा राखिएका आठ जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । ४५ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकामध्ये आठ जनाको जेठ २ गते सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । भारतका विभिन्न ठाँउबाट घर फर्केका ४ सय ४१ जनालाई नरैनापुर गाउँपालिकाले उद्दार गरी क्वारेण्टाइनमा राखेको छ । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका– १, ३ र ५ का १८, २०, २२, २५, २५, २७, ३२ र ३६ वर्षीय पुरूषमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका फोकल पर्सन नरेन्द्र श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
बर्दियामा कोराना भारइरस परिक्षणका लागि स्वाव संकलनको दायरा बढाइएको छ । हालसम्म ६ सय ५७ जनाको परिक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन भएकोमा तीमध्ये ५ सय ८३ जना जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । एक जनाको पोजेटिभ आएको छ । ७२ जनाको परीक्षण रिपोर्ट आउन बाँकी छ ।
कपिलवस्तु जिल्लाको १० स्थानीय तहमध्ये आठ स्थानीय तहमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएको छ । कपिलवस्तुमा प्रवेश गर्ने र बाहिर जाने अत्यावश्यक बाहेकका व्यक्ति र सवारी साधनलाई पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घ नारायण पौडेलले वताउनु भयो । सङ्मितहरूमध्ये चार जना सुरक्षाकर्मीलाई तौलिहवास्थित तिलौराकोट होटलमा कोरोना अस्थायी अस्पतालको स्थापना गरी राखिएको छ ।
दाङ जिल्लामा तीन जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ । जेठ २ गते साँझ मात्रै उनीहरूमा कोरोना पुष्टि भएको हो । बेलझुण्डीस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा बाँकेको नरैनापुरका आठ जना कोरोना सङ्क्रमितलाई ल्याइएको छ ।
प्रदेश ५ का मुख्य मन्त्री शङ्कर पोखरेलले विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको माहामारीलाई व्यवस्थापन, गुरुयोजना र प्रदेश स्वास्थ्य नीति निर्माण लगायतकाविभिन्न विषयमा नेपाल राष्ट्रिय चिकित्सक सङ्घ लुम्बिनी शाखाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
वैशाख १ गतेबाट क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको अवधि पूरा भएपछि कोरोना सङ्क्रमणको परीक्षण गर्न स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोली हुम्ला जिल्लाका सात ओटै गाउँपालिकामा परिचालन गरिएको छ । विभिन्न जिल्लामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि मानिसको आवतजावत र सवारी साधन सञ्चालनमा थप कडाइ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम (पश्चिम)ले जनाएको छ ।
सल्यान जिल्लाको सिद्ध कुमाख गाउँपालिकामा कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि भएका विभिन्न जिल्लाबाट आएका १० जनाको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि सुर्खेत प्रयोगशालामा पठाइएको छ । सिबिएम नेपालको सहयोगमा आइएनएफ जुम्ला र अपाङ्ग पुनस्र्थापना तथा विकास केन्द्रले सञ्चालन गरेको सबलता परियोजनाअन्तर्गत जुम्लाका अति विपन्न ३५ जना दृष्टिविहीन तथा व्हीलचेयर प्रयोगकर्ता अपाङ्गता भएका अति अशक्त व्यक्तिलाई राहत वितरण गरिएको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरले जेठ १ गते अघि सारेको छानबिन प्रक्रियाको पहिलो चरणमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको राहत खरिदसम्बन्धी कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ । वैशाख ३० गते धनगढी उपमहानगरपालिका–४ उत्तरबेहडीमा वितरण गरिएको राहत गुणस्तरहीन प्रमाणित भएको थियो ।
आरडीटी परीक्षणबाट पोजेटिभ देखिएका ५० वर्षीय व्यक्ति बझाङ जिल्ला अस्पताल सिमखेतको आइसोलेशनमा राखी स्वाब परीक्षणका लागि धनगढी पठाइएको छ । दार्चुला जिल्लाको दुहुँ गाउँपालिका–२ मा लकडाउन अवधिमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र जनप्रतिनिधिहरूको हिकिला स्वास्थ्य चौकीमा जेठ २ गते आरडिटी टेस्ट गरिएको छ ।
कोराना भाइरसका कारण रोकिएको दादुरा तथा रुबेला खोप जेठ २ गते डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–२ पुन्नेतोलामा ९ महिनादेखि ५ वर्ष मुनिका ६१ जना बालबालिकालाई लगाइएको छ ।